TPEC iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Somalia oo kulmay [Sawirro] – TPEC
TPEC iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka Somalia oo kulmay [Sawirro]
GAROWE (TPEC)- Waxaa galabta xarunta Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland shir ku yeeshay TPEC iyo Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka Soomaaliya, waxaana looga hadlay arrimo ku aadan qaabka loo wajahayo doorashada waddanka ee la filayo inay qabsoonto 2020.
Shirkan oo u dhaxeeyay xubnaha Guddiga doorashooyinka Puntland iyo kuwa ka socday dhinaca DFS oo ay hormuud u ahayd Xubin kamid ah guddigaas oo lagu magacaabo Khadiijo Cosoble, ayaa aad loogu lafo guray qaabka doorashooyinka loo samayn karo iyo khibrada laga qaadan karo Puntland.
Waxaa sidoo kale kulankaas joogay Sarakiil katirsan Howlwadeenada Guddiga DFS, khabiiro ka socotay Qaramada Midoobay iyo hay’adaha Guddiga heer qaran kala shaqeeya arrimaah doorashooyinka.
Shirkan markii uu soo dhammaaday waxaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay Guddoomiyaha TPEC Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo sheegay in guddigan ay kawada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda doorashooyinka dalka.
Cabdiraxmaan Diiriye ayaa intaas ku daray in Guddigan ay u bandhigeen muhiimadda ay leedahay in lagala shaqeeyo TPEC doorashada Puntland ee 2019 maadama ay iyadu horayso islamarkaana tijaabo u noqoto nidaamka Dimuqraadiyadda ee la filayo in Soomaaliya la gaarsiiyo.
Guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in Guddigan shirar dambe isugu imaan doonaan, balse kulankan uu ku saabsanaa is-xog waraysi kaliya.
Kulankan ayaa qayb ka ahaa Daraasad lagu samaynayo qaabka loo diinwaangalinayo Codbixiyaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya doorashada 2020 ee lagu wado in shacabku codkooda dhiibtaan.